Privy: Waa fududahay in la istcimaalo, Astaamaha Awooda leh ee La Wareegista Macaamiisha Goobta | Martech Zone
Mid ka mid ah macaamiishayada ayaa daaran Iskuduwaha, Nidaamka maaraynta maaddada ee bixisa dhammaan aasaasiga - oo ay ku jiraan ecommerce. Macaamiisha iskaa wax u qabso ah, waa madal aad ufiican oo xulashooyin badan leh. Waxaan inta badan kugula talineynaa marti gelinta WordPress sababtoo ah awooddeeda aan xadidneyn iyo dabacsanaanta… laakiin qaar ka mid ah Squarespace waa xulasho adag.
Halka Squarespace ka maqan tahay API iyo malaayiin isku dhafan oo wax soo saar leh oo diyaar u ah inay socdaan, wali waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah aaladaha cajiibka ah ee lagu hagaajinayo bartaada. Waxaan leenahay hal macmiil oo raadinayey in lagu daro soo-dhex-gelinta boggiisa si aan ugu dhiirrigelino dadka isticmaala inay ku soo biiraan joornaalkiisa. Waxaan ka helnay xal adag gudaha Gawaarida.
Noocyada 'Privy Features' Ku dar
Jiid oo Dhig Naqshadeeye - Ka xusho noocyo dhowr ah oo muujinaya goobta oo ay ka mid yihiin popups, boorar, baararka, duufaanta, foomamka gundhigga ah, bogagga degitaanka, waxyaabaha kiciya, iyo bogagga mahadsanid. Waxaad si fudud u qaabeyn kartaa khibradaha beddelaadda ee ku habboon goobtaada iyo magacaaga jira. Ama waxaad u dhisi kartaa bogga soo degida martigelinta ee bulshada ama qaybinta lacag bixinta.
Bartilmaameedsiga - Bartilmaameedka ku saleysan ujeedka ka bixitaanka, juqraafi, qiimaha gawaarida, dariiqa gudbinta, nooca qalabka iyo waxyaabo kale oo badan.
Xeerarka kuubanka - isku hagaajin oo muujiya isticmaal keliya ama lambarro kuuboon badan kadib markii la galo. Xitaa awood u siiso dadka isticmaala inay ku iibsadaan dalabyada ku jira taleefannadooda iyagoo booqanaya dukaanka lebenka iyo hoobiye.
Isdhexgalka - Isku xira xiriirada cusub waqtiga dhabta ah suuq geynta emaylka, CRM, ecommerce ama dib u habeynta barnaamijka. Si qoto dheer u dhexgal ololeyaasha 'Privy' nidaamkaaga shaqo ee jira adoo taageeraya laba-jibaar-galitaanka, meelaha gaarka ah, iyo qaybaha.
Isdhexgalka waxaa ka mid ah Shopify, Squarespace, Magento, ecwid, Bigcommerce, Weebly, WordPress, Hubspot, Tumblr, Joomla, Zen Cart, Eager, 3dcart, Spacecraft, Mailchimp, ConstantContact, Mailerlite, Emma, ​​Infusionsoft, Drip, ConvertKit, GetResponse, SendinBlue, ActiveCampaign, Mailigen, Soundest, Benchmark, Delivra, CampaignMonitor, ConvertKit, AWebert, Customer.io, Bizzy, Klaviyo, Drip, Bizzy, Mailup, inbox, Mad Mimi, dotmailer, Feedblitz, Freshmail, Remarkety, Fishbowl, iLoyal, Slack and Adroll.
Sidee Loogu Dhaqan Galiyaa Ololahaagii Ugu Horeeyay
Waa tan socod-4-daqiiqo ah, halkaas oo Privy uu kaagala hadlayo talaabooyinka aasaasiga ah ee qaabeynta ololahaaga ugu horreeya.
Iyadoo Qiimaha Qiimaha waxaad marin u heli kartaa muuqaal kasta oo muuqaalka goobta ah, is-dhexgal, iyo nooc bandhig ah hal qiimo! '' Privy wuxuu u simay duurka dhammaan ganacsatada, iyadoon loo eegin miisaaniyadda si loo helo aaladda beddelka ugu wanaagsan ee suuqa.
Maxaad dhab ahaan heshaa Taasi waxay ka dhigan tahay sharci kasta oo lagu bartilmaameedsanayo goobta, ololeyaal keydinta gawaarida, ololeyaal kacsanaan ah, ololeyaal lagu guuleysto, koodhadh kuu gaar ah, gundhigga HTML, naqshadeynta naqshadeynta, baaritaanka A / B, isugeynta farriimaha facebook, rakibidda noocyada caadooyinka, iyo ka baxsan xirmooyinka sanduuqa inta ka hartay farsamadaada. ”
Tags: 3dcartActiveCampaignqoridAWebertbenchmarkBigCommerceWareerMaamulaha OlolahaConstantContactConvertKitctaMacaamiil.iodelivradotmailerfaleeboEagerEcwidEmmaujeedada bixitaankaFeedblitzFishbowlFariin cusubGetResponsehubspotiLoyalInfusionsoftsanduuqaJoomlaKlaviyoboggaga soo degayaMad MimimagentomailchimpMailerliteMailigenBoostadagujisidqarsoodi ahXusuusinSendinBluedukaankadebcinUgu codka badanCirkaboodadatumblrweeyalWordPressCart Zen